Agaasimaha wasaaradda Dastuurka oo tababar u soo xiray xubno ka socday ururrada bulshada+Sawirro | Baydhabo Online
Agaasimaha wasaaradda Dastuurka oo tababar u soo xiray xubno ka socday ururrada bulshada+Sawirro
Tababar ku saabsanaa dib u eegidda dastuurka ayaa loo qabtay xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka waxaana maal gelinaysay hay’adda EISA oo wasaarada kala shaqaysa tababarka shaqaalaha.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac gudoomiyaha dallada SOSHENSA ayaa ka qayb galayaasha ka codsaday in waxa lagu baray tababarka ay ugu shaqeeyaan bulshada ay ka yimaadeen.
“Waxaan idnka codsanayaa in aad ugu shaqeysaan aqoonta aad faa’iiddeen bulshadiinna maxaa yeelay haddii aadna adinku fahamsiin bulshada dastuurka aragti qaldan ayay ka haystaan mana u heystaan in iyagu ay leeyihiin dastuurkaan” ayuu yiri C/laahi Maxamed Shirwac.
Madaxa hay’adda EISA Justin doua ayaa uga mahad celiyay ka qayb galayaasha sida ay u ilaaliyeen waqtiga muddadii uu tababarku socday .
“Waad ku mahadsantihiin sida aad u ilaaliseen waqtiga iyo sida aad u dhageysateen casharradii la idin siinayay anagu mar waliba waan idinku caawinaynaa wixii aan awoodno laakiin waa in aad ka faa’iideeysataan waxa la idin barayo” sidaasi waxaa yiri Justin Doua.
Agaasimaha wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Zubayr ayaa sheegay in kulamadaan ay qayb ka yihiin gaarsiinta qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan ugala jeednaa kulamadaan loo qabanaayo bulshada sidii loo wada gaari lahaa dhamaan bulshada maxaa yeelay xubnahan ka socda ururada bulshada rayinka waxaa ay xog fiican ka hayaan rabitaanka ummadda ay ku dhex jiraan horey waxaan tababarkaan oo kale ugu qabanay shaqaalaha wasaaradda Dastuurka iyo shaqaalaha guddiyada ku shaqada leh dib u eegista dastuurka. ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda Dastuurka.
Sawir qaade Farxaan Suleymaan Daahir “Maasgaro”